Dalladda Waxbarashada Ahliga ah ee PEN ee Puntland oo Bayaan soo saartay(Masawiro)
April 21, 2012 - Written by
Boosaaso Dalladda Ahliga ee Puntland ayaa kulan ay yeesheen waxay ka soo saareen bayaan lid ku ah wasaarada waxbarashada waxayna dhaliil u soo jeedsheen qaabka ay rabto in ay u maareyso wasaarada waxbarashada ee Puntland .Nuqul ka mid ah bayaanka ayaa wuxuu soo gaaray Halgan.net wuxuuna u qornaa sidan.
Ka dib markii ay burburtay Dawladdii Dhexe Ee Soomaaliya, ayna meesha ka baxeen adeegyadii ay u qabanjirtay bulshada sida: Waxbarashada, Caafimaadka iwm. Waxaa isu xilqaamay in ay buuxiyaan baahiyaha bulshada ee kala duwan gaar ahaan Waxbarashada dad isugu jira aqoonyahanno, waxgarad , culumaa
’udiin iyo odayaal dhaqameed kuwaas oo waxbarashada Dugsiyada gaarka ah (Private Sector) oo 20 jirsatay, naf, maal iyo waqtiba u huray, ugu dambayntiina ku mideeyey Dugsiyadaas Dalladda Waxbarashada Ahliga ah ee PEN (Private Education Network) taasoo ah isku xiraha Dugsiyada gaarka ah. Iyadoo ilaahay mahaddiis qayb libaax ka soo qaadatay Waxbarashada jiilka soo koraya intii ay hawshaas ku dhex jirtay.haysana arday gaaraysa 23,907 arday.
Dalladdu waxay qayb libaax ka qaadatay dardargalinta waxqabadkii ay u hawl gashay wasaaraddu laga soo bilaabo 2005tii, taasoo ku soo gabagabawday in la sameeyo isu soo dhowaynta muqararka dugsiyada sare ee Pl iyo midaynta imtixaanaadka (Centralized Exams).
bayaankii oo Dhameystiran Hoos ka Akhriso